काठमाडाैँ । शुक्रबार अपराह्न भैँसेपाटीस्थित निवास पुग्दा उहाँले चिनियाँ सरकारका प्रतिनिधि, प्राध्यापक र चिकित्सकहरुबाट बधाई ग्रहण गरिरनुभएको थियो । उहाँको वीच्याट अकाउन्टमा निरन्तर फोनको घन्टी बजिरहेपछि हामीले केहीबेर कुर्यौँ । उहाँले कोरोनाकै विषयमा अनुसन्धान गर्न चीनको केन्द्र र प्रान्तीय सरकारबाट ८ लाख आरएमबी (चिनियाँ पैसा) अनुदान पाउनुभएको रहेछ । एक करोड ३२ लाखभन्दा बढी रुपैयाँ हुने सो रकम प्राप्त गरेको खबर भर्खरै चिनियाँ साथीहरुबाट पाएका प्रा डा.झा पनि खुसी देखिनुहुन्थ्यो ।
“सरी है, चीनबाट साथीहरुको निरन्तर फोन आएकाले तपाईंहरुलाई कुराएँ” प्रा।डा। झा कुराकानीलाई अब तयार हुनुभयो । हामीलाई पनि जिज्ञासा भयो कोरोना विषयमा नै जान्ने । किनभने यतिखेर संसारका मानिसले सबैभन्दा धेरै खोजी गरेको र सुन्न चाहेको विषय कोरोनाबाट कसरी बच्ने भन्ने नै होला सायद । हामीले पनि यहीँबाट वार्ता शुरु ग¥यौँ– तपाईंले प्राप्त गर्नुभएको अनुदान कस्तो हो ? यसबाट के गर्ने हो ?
चीनको उहानमा लकडाउन गर्दा पश्चिमाहरुले मानवअधिकारको विषय उठाएको भन्दै डा।झा भन्नुहुन्छ “वास्तवमा त्यो त मानअवधिकार भन्दा पनि जनताको जीवन रक्षा गर्नका लागि लिइएको कदम थियो नि होइन रु हेर्नुहोस् हाम्रो नेपालीमा पनि बडो वैज्ञानिक र पुरानो भनाइ छ नि महामारीमा ज्यान जोगाउनु भन्ने । आखिर महिनादिन भन्दा बढी नै लकडाउन भयो त्यसैले त थोरै क्षतिमै रोगमाथि विजय नै प्राप्त भयो नि होइन ? नत्र भन्नुस त के हालत हुन्थ्यो होला आज चीनको ? अमेरिकाले पनि यही गर्नुपथ्र्यो । खुल्ला समाजको परिचायक बन्न खोजेर मात्र हुँदैन, जुन देशको पनि पहिलो काम त आफ्ना नागरिकको ज्यान बचाउने नै हो भन्छु मत ।
“हाल नेपालमा लकडाउन भन्दा प्रभावकारी उपाय अर्को केही छैन भन्नुहुन्छ उहाँ । सरकारले भनेको मानौँ, लकडाउनका घरमै बसौँ, सामाजिक दूरी कायम गरौँ, भीडभाडबाट जोगिआँै यो भन्दा राम्रो उपाय अरु केही छैन ।” झाको सुझाव छ । कम्तीमा पनि २८ दिन लकडाउन गर्न उहाँले सरकारलाई सुझाव दिनुभयो । नेपालमा हालसम्म छ जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ । यो ठूलो सङ्ख्या नभएपनि खतराको घण्टी बजेको अवस्था हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ । चीन वा भारतले अवलम्बन गरेको मोडललाई अवलम्बन गरेर नागरिक आफै सचेत भए आफ्नो समाज र देशलाई जोगाउन सकिने उहाँको भनाइ छ ।